Yazi iMozilla — Mozilla
Funda okungakumbi ngeeprojekthi, iimveliso nemigaqo yethu eyenzelwe ukunceda abantu bazimele ngezabo iinyawo baze bahlole izakhono zabo ezipheleleyo zobomi kwi-intanethi.
Into esiphembelelayo nesenza sahluke
Ingaba ufuna ukusebenza kwaMozilla? Faka isicelo namhlanje!
Iindaba, amagqabantshintshi nemilembelele yeprojekthi yakwaMozilla
Isikhokelo sesimbo sakwaMozilla
Iilogo, imithetho yeekopi, izinto ezibonakalayo nezinye ezingakumbi
Iindawo & nabantu oqhagamshelana nabo
Iidilesi, ii-imeyili, inkxaso neefomu zengxelo
Iqumrhu elikhonza abantu kakuhle. Ngenene.
Amaqela Ethu oLawulo, Abameli beBhunga neeBhodi zabaLawuli
Amavandlakanya ngezinto esizenzayo nesizenzayo ngoku sithethayo
Yiba litshantliziyo elinegalelo kwiinkalo eziliqela ezahlukeneyo
Cofa kwinkcazelo nakwezinye izinto eziluncedo
Iziko leemfihlo zabucala
Indlela iMozilla ephatha ngayo iinkcukacha zakho
Umbutho ongenzi ngeniso osemva kwemveliso yakwaFirefox neyakwaMozilla